သူ့ရဲ့ ပုံတူကိုသေရာပါဆေးမင်ကြောင် ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက်မြန်မာနိုင် ငံ သားကြောင့် မျက်ရည်တောင်ဝဲမိ တယ် ဆိုတဲ့ Sinon Loresca – XB Media Myanmar
သူ့ရဲ့ ပုံတူကိုသေရာပါဆေးမင်ကြောင် ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက်မြန်မာနိုင် ငံ သားကြောင့် မျက်ရည်တောင်ဝဲမိ တယ် ဆိုတဲ့ Sinon Loresca
October 20, 2020 Bestie_Author
သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သေရာပါဆေးမင်ကြောင်ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကြောင့် မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်ဆိုတဲ့ Sinon Loresca
တစ်ကမ္ဘာလုံးက Catwalk King လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ရလောက်တဲ့အထိ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် LGBT မော်ဒယ် Sinon Loresca ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အရမ်းချစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဒုတိယ မြောက် မိခင်နိုင်ငံလို့တောင် ပြောလေ့ရှိသူတစ်ဦးပါ။ Sinon က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင် နေခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၁) နှစ်တာ အချိန်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မေ တ္တာ တွေကို ပေးစွမ်းနေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း နူညံ့ပြီး ကြင်နာ တတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင် Sinon ကို ကိုယ့်လူမျိုးသွေးသားတစ်ယောက်လို ချစ်ခင်အားပေးကြ ပါတယ်။
စိတ်ထားကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ Sinon ကို မြန်မာပရိသတ်တွေက ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ တစ် ချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင် သေရာပါတဲ့အထိ ဆေးမင်ကြောင်တက်တူးတွေထိုးပြီး အားပေး ဝန်းရံကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း Sinon က “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တတိယမြောက် ကျွန်နော်၏ မျက်နှာပုံ သေရာ ပါတက်တူး ထိုးထားသော ချစ်ရသော ပရိတ်သတ် ကို ကျန်နော် အရမ်းလေးစားပြီး ဂုဏ်ယူပြီး မျက်ရည် ဝဲ မိပါတယ်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပြီး လေးစားလျက်. ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သေရာပါဆေးမင်ကြောင်ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကြောင့် မျက် ရည်တောင်ဝဲမိတဲ့အထိ ဝမ်းသာနေရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာတွေပေးလို့ မေတ္တာ တွေပြန်ရ တဲ့ Sinon ရဲ့အဖြစ်က အားကျစရာပါပဲနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီး အား လုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆု တောင်းပေးလို က် ပါတယ်။
သူ႔ရဲ႕ ပုံတူကို ေသရာပါေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးေပးတဲ့ တတိယေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေၾကာင့္ မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲမိတယ္ဆိုတဲ့ Sinon Loresca
တစ္ကမာၻလုံးက Catwalk King လို႔ တင္စားေခၚေဝၚရေလာက္တဲ့အထိ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ LGBT ေမာ္ဒယ္ Sinon Loresca ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရမ္းခ်စ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ဒုတိယ ေျမာက္ မိခင္ႏိုင္ငံလို႔ေတာင္ ေျပာေလ့ရွိသူတစ္ဦးပါ။ Sinon က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ ေနခဲ့တာ အခုဆိုရင္ (၁) ႏွစ္တာ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေန ၿ ပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေမ တၱာ ေတြကို ေပးစြမ္းေနသူတစ္ေ ယာ က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း ႏူညံ့ၿပီး ၾကင္နာ တတ္တဲ့ ႏွလုံးသား ပိုင္ရွ င္ Sinon ကို ကိုယ့္လူမ်ိဳးေသြးသားတစ္ေယာက္လို ခ်စ္ခင္အားေပးၾက ပါတယ္။
စိတ္ထားေကာင္းၿပီး ၾကင္နာတတ္တဲ့ Sinon ကို ျမန္မာပရိသတ္ေတြက ခ်စ္လြန္းအားႀ ကီး လို႔ တစ္ ခ်ိဳ႕ပရိသတ္ေတြဆိုရင္ ေသရာပါတဲ့အထိ ေဆးမင္ေၾကာင္တက္ တူးေတြထိုးၿပီး အားေပး ဝန္းရံၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာလည္း Sinon က “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တတိယေျမာက္ ကြၽန္ေနာ္၏ မ်က္ႏွာပုံ ေသရာ ပါတ က္တူး ထိုးထားေသာ ခ်စ္ရေသာ ပရိတ္သတ္ ကို က်န္ေနာ္ အရမ္းေလးစားၿပီး ဂုဏ္ယူၿပီး မ်က္ရည္ ဝဲ မိပါတယ္။ ေက်းဇူးအရမ္းတင္ၿပီး ေလးစားလ်က္. ” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေဖ့ စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေျပာလာပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ပုံတူကို ေသရာပါေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးေပးတဲ့ တတိယေျမာက္ျမန္မာႏို င္ငံ သားေၾကာင့္ မ်က္ ရည္ေတာင္ဝဲမိတဲ့အထိ ဝမ္းသာေနရွာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာေတြေပးလို႔ ေမတၱာ ေတြျပန္ရ တဲ့ Sinon ရဲ႕အျဖစ္က အားက်စရာပါပဲေ နာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီး အား လုံးလည္း သာယာေ ပ်ာ္ ႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆု ေတာင္းေပးလို က္ ပါတ ယ္။
မကွယ်လွန်ခင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် အ မှတ် တရနောက်ဆုံးစာလေးတစ် စောင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲ
The Florist by Yun က လီလီ ပန်းစည်းတွေကို နေတိုးက ဝယ်ယူ အားပေးခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ လွင်မိုး